SomaliaReport: Ra’iisul Wassaraha Booqday Xeebta Liido
By MOHAMED BEERDHIGE 11/28/2011
Markii ugu horeysay mudo sannado ah, ayaa Ra’iisul Wasaaraha ku meergaarka ee Soomaaliya, Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ku horkacay golaha wasiiradiisa xeebta caan ah ee Mogadishu Jimcihii galinka danbe.
Aragti xusaysa rugtii dalxiisayaasha, ra’iisulwasaaraha iyo golahiisu waxay booqdeen xeebta bilicdasan ee Liido ee degmada cabdicasiis ee caasimada Soomaaliya. Arrin u muuqatay inay nabadi kusoo dabaalatay Muqdisho, waxay soo bandhigeen tartan xiiso leh ee kubada cagta.
Waa markii ugu horeysay mudo 21 sano ee saraakiisha DKMG, oo la socdo ra’iisul wasaaraha, ay ku raaxeysteen loolan kubada cagta magaalada ay xabadu daloolisay.
Ra’iisul wasaaraha iyo golahiisu waxay la cayaareen loolan xiiso leh, koox shaqaalaha bulshada. Kooxda DKMG ayaa ku guulaystay 2:1.
Bulsho fara badan oo degaanka ayaa taageeraysay iyagoo daawanaya tartanka xiisaha leh.
“Loolankan mudo dheer ayaa la xasuusandoonaa. Markii aan ku noolaan jiray degamda Boondheere waxaan iman jiray kuna cayaari jiray kuna dabaalan jiray Jimca Kasta,” waxaa yiri Ra’iisul Wasaaraha cayaarta kabacdi.
“Muhimada cayaartu waxay ahayd in dunida loo muujiyo in Muqdisho nabad tahay,” Cabdiraxmaan Cusman Yiroow, afhayeenka DKMG ayaa u sheegay Somalia Report, isagoo kusii daray in wasiirada DKMG ugu badankood joogeen.
“Waxay ahayd layaab waxaana filayaa in Muqdisho nabadnoqanayso dhawaan,” Liibaan Yare, mid kamid ah taageerayaasha kubada cagta ayaa u sheegay Somalia Report.
Kadibna, saraakiisha DKMG waxay ku dabaasheen isla xeebta.